Taunggyi - The Cherry Land: ဇရာနဲ့ယှဉ်သော သံဝေဂ
ရေးသားသူ Ma Yangon Thu အချိန် 10:20:00 PM
အရမ်းကောင်းတဲ့ အတွေးပါပဲ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. မရန်ကုန်သူရေ...
Sunday, July 29, 2007 10:50:00 PM
မရန်ကုန်သူရေ အရမ်းကောင်းတဲ့ စာပိုဒ်လေးပါပဲ.. ကျွန်တော်လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးရဦမယ်... အခု Post အတွက် ကျေးဇူးတကယ် တင်ပါတယ်..
အရင်တုန်းက ဘုရားကို ရောက်ပေမယ့် အဲဒီစာကို မတွေ့ဖူးဘူး
ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ အဲဒီစာလေးကို ဖော်ပြခွင့်ပေးပါ
Thanks for ur sharing, I know Taunggyi very closely. But haven't been to that pagoda and so don't getachance to read. Now,I know it without getting there.
naylinn , ကိုရဲမြန်မာ, hko>> ကျွန်မလည်း အဲဒီစာလေးကို ကြိုက်လို့ တောင်ကြီးချယ်ရီ မှာတင်မယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးရပြီးတင်လိုက်တာပါ။ ဒီစာကနေ တခုခုရတယ်ဆိုရင် ကျေနပ်စရာပါပဲ။း)
နိုင်းနိုင်းရေ.. ဒီစာက ကျွန်မကိုယ်ပိုင်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်း ဖေဖေ က ဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားတာကို ကျွန်မကလည်း ကူးယူထားမို့လို့ အခုလို တဆင့်ပြန်မျှဝေနိုင်တာပါ။ နိုင်းနိုင်း blog မှာလည်း ယူသုံးနိုင်ပါတယ်။း)
Tuesday, August 02, 2016 7:27:00 AM